सूर्यनाथ उपाध्याय | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय सूर्यनाथ उपाध्याय
सन् १९४७ मा पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका सूर्यनाथ उपाध्यायले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तरका साथै लण्डन विश्वविद्यालय बेलायतबाट एलएलएम गरेका छन् । करीब ३४ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका उनले २०५७ सालदेखि २०६३ सालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर काम गरेका थिए । जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव, २०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगको सचिवलगायतका जिम्मेवारी पनि उनले वहन गरिसकेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
१. संसारका सबै देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने चाहना देशको शासन व्यवस्थाका सञ्चालकहरुदेखि लिएर सर्वसाधारण सबै नागरिकको हुन्छ । तर, जब त्यस चाहनालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, त्यतिखेर शासक तथा सर्वसाधारण नागरिकको परीक्षण हुन्छ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु, यसबारे भाषण गर्नु, यसो गर्छु,उसो गर्छु भनी वचन दिनु त सजिलो छ तर गरेर देखाउन निकै गाह्रो हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी समाचार, लेख, भाषण, सुझावहरुको कमी छैन । दिनदिनै सञ्चारमाध्यममा ती कुरा छरपस्ट आइरेहेकै हुन्छन्, हामीले देखिरहेका छौं । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अहिलेको स्थिति केही समय पहिलेको भन्दा पनि खस्कँदो छ । प्रश्न छ, अब के गर्ने ? कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने ?
२. नेपालको वर्तमान अवस्था ज्यादै तरल छ । अहिले कसको कुरा कसले मान्ने र कसरी मनाउने भन्ने समस्या व्याप्त छ । विभिन्न मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कुन कामलाई राजनीतिक भन्ने, कसलाई आपराधिक भन्ने, कसले नियन्त्रण गर्ने यी यावत् कुरा धूमिलजस्ता छन्- उत्तरदायित्वको ठेगान लगाउनै गाह्रो छ । यसकारण पनि भ्रष्टाचारलाई शासन व्यवस्थाका विभिन्न न्यूनतम मापदण्डको रुपमा परिभाषित गर्नुपरेको छ । सरकारी राजस्वको खर्चको मापदण्ड, त्यसप्रतिको जवाफदेहितालाई एकातिर कार्यरुपमा स्थापित गर्नु परेको छ भने राजस्व सङ्कलनमा देखिएको चरम विचलन अर्कोतिर छ । त्यसैगरी आर्थिक र वित्तीय उत्तरदायित्व वहन नियामक निकायबाटै पनि हुन सकेको छैन । वर्तमानमा अपराधको परिभाषा नै धूमिल भएको छ । जबसम्म सम्पूर्ण क्षेत्रका अव्यवस्थालाई निर्मूल गरी उत्तरदायित्वको निश्चितता र त्यसको कडाइका साथ पालना गराउने काम हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । यस अर्थमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम हाम्रो सन्दर्भमा सबैको उत्तरदायित्व भएको छ । खासगरी कानून पालना गराउने नियामक निकायहरुले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरे भनेमात्र दण्डहीनता कम हुन्छ र यो अहिलेको आवश्यकता हो । प्रत्येक व्यक्तिको केही न केही देन भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हुन सक्छ । हामी सबै आआफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेतर्फलाग्यौं भने यो निश्चितरुपमा नियन्त्रण हुन सक्छ ।
३. यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही थप कुरा आवश्यक पर्दछ । तीमध्ये भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून र त्यसलाई कडाइसाथ लागू गराउने संयन्त्र प्रमुख हो । जहाँसम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनको प्रश्न छ, यो धेरै हदसम्म ठीक छ। केही कमीकमजोरी रहेकोमा पनि मुद्रा अपचलन, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय अनुशासन र राजस्व सङ्कलनसित सम्बन्धित कानूनहरु भएकाले त्यति अप्ठेरो छैन । जहाँसम्म अधिकार सम्पन्नताको कुरा छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त्यस्तो संयन्त्रमा हुनुपर्ने स्वायत्तता र स्वतन्त्रताजस्ता महङ्खवपूर्ण चरित्र विद्यमान छन् । हामीकहाँ भएजस्तो संवैधानिक निकाय भ्रष्टाचार रोक्नका लागि विरलै देशमा होलान् । भ्रष्टाचार रोक्ने राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हामीसँग रहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको रणनीति बनाएको छ । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरिसकेका छौं । यी सबै सकारात्मक कुरा हुन् । यस्ता व्यवस्थाले एकखालको पाटपुर्जायुक्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मेशिन तयार हुन्छ । तर, मेशिन नै पूर्णक्षमतामा चलेन, खिया लाग्यो, त्यसमा समयसमयमा रेखदेख र मर्मत सम्भार भएन भने त्यसले खोजेको जस्तो परिणाम दिन सक्दैन ।
४. पाँच वर्षपुग्न लाग्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तहरु छैनन् । यो साधारण कुरा होइन । आयुक्त नभएको त्यस्तो निकायको कुनै काम नै छैन । अन्य आधारभूत ठाउँहरु जस्तै, महालेखा परीक्षक छँदै छैनन् र लोकसेवा आयोगमा पनि प्रमुख आयुक्त छैनन् । त्यहाँको पदपूर्ति गर्ने कुनै चासो पनि सरोकारवालाहरुमा देखिएको छैन । यो उत्तरदायित्व विहीनताको चरम अवस्था हो । जुन शासन व्यवस्थाको सञ्चालनका लागि यत्रो मारामार छ, त्यही शासन व्यवस्थाको हाल यस्तो छ भने कसले कुन शासनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ? त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीले गर्नुपर्ने सर्वाधिक महङ्खवपूर्ण काम भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तहरुका साथै महालेखा परीक्षक र लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षको नियुक्ति हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नीति-रणनीति इत्यादि बनाउनुभन्दा पनि पहिले यी नियुक्तिहरु हुनुपर्यो ।
५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने थप अरु कामहरु पनि भएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी कानून र स्फूर्तिपूर्ण सञ्चारव्यवस्था हामीकहाँ विद्यमान छ । सरकारी वा सार्वजनिक काम-कारबाहीमा पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुग्छ । यस क्षेत्रमा हाम्रो स्थिति नराम्रो छैन, बरु कहिलेकाहीँ हुने गरेको पारदर्शिताको दुरुपयोग वा आग्रह पूवाग्रहलाई भने उत्तरदायित्वको प्रभावकारी स्थापनाबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समग्रमा, हाम्रो सञ्चारजगत् भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकै सशक्त छ र यो राम्रो लक्षण हो । तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को महङ्खवपूर्ण पाटो सदाचार र नैतिकताको स्थापनामा चाहिँ हामी निकै पछाडि छौं । हाम्रो आगामी पुस्ता कस्तो हुने भन्ने कुरा हाम्रा विद्यालयहरुमा पढाइने विषय र त्यहाँको समग्र वातावरणमा भर पर्छ । दु:खका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा स्कूल र अन्य सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुमा अनुशासन छैन, अराजकता ज्यादा छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा हुने गरेको चरम राजनीतिक र अन्य खालका गैरजिम्मेवारीपूर्ण हस्तक्षेपहरुले नयाँ पुस्ता कानून र व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुँदैन । कानून तथा व्यववस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक तङ्खव हो ।
६. अन्त्यमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै र्छलङ्ग छ । यस्तो र्छलङ्ग अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने काम नहुनु वा नगरिनुमा उत्तरदायित्वबोध नभएजस्तो देखिन्छ । जसलाई जनताले देशको शासन सञ्चालनको जिम्मा दिएका छन्, उनीहरुबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चासो नदेखाइनु विडम्बना हो । हामी नबिसौं, प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुको आजको कामबाट नै भोलिको मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।